Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, players must have received this email and deposit a minimum of £10 using the bonus code “20VINCI”‘
A bhonasi pamusoro 20 Tunoruka zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 20 free spins on Da Vinci Diamonds on their first deposit within in the promotion period.
winnings All vaiwana kubva Tunoruka achapiwa mubayiro munyika bhonasi mari uye kutakura wagering chinodiwa 30x yose bhonasi mari chichiwanikwa
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, player would of received this email, make a deposit a minimum of £10 using the bonus code “MATCH100”
A bhonasi pamusoro 100% kwenyu okubhengi iroro kusvikira vaifanira pamusoro £ 100 okutanga zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, players must have received this email and deposit a minimum of £10 using the bonus code “CLEO50”
A bhonasi pamusoro 50 Tunoruka zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 50 free spins on Cleopatra on their first deposit within in the promotion period.
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, player would of received this email, make a deposit a minimum of £10 using the bonus code “BOOSTED”
A bhonasi pamusoro 50% of your first deposit of that day up to a maximum of £250 will be added to your account.
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, players must have received this email and deposit a minimum of £10 using the bonus code “STAR25”
Tunoruka izvi zvichava ukoshi 10p uye kushanda musi Starburst
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 25 vakasununguka Tunoruka musi Starburst parwendo rwavo rwokutanga dhipozita mukati vari kukwidziridzwa nguva.
To be eligible for a 50% up to £50 Bonus and 10 bhonasi Tunoruka, players must deposit a minimum of £10 using the bonus code “CLEOMATCH”
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, player would of received this email, make a deposit a minimum of £10 using the bonus code “MATCH200”
A bhonasi pamusoro 200% of your first deposit of that day up to a maximum of £40 will be added to your account.
Bhonasi Credits vakasununguka uye asingakwanisi kushandiswa anotevera mitambo: vatorwa, Dracula, Pfuti 'N’ Roses, Jimi Hendrix, South Park, South Park Reel Tobira, Divine Fortune, The Invisible Man, Cleopatra MegaJackpot, Siberian Storm Megajackpot, Megajackpots Isle O'Plenty, Wolf Run Megajackpot, Star Lanterns Megajackpot, Gong Xi Fa cai, More Monkeys akatisiyira Jackpot, Genie Jackpots, Winstar, Justice League, Batman, Superman, The Flash, Green Lantern, An Evening pamwe Holly Madison, Psycho, James Dean, The Nguruve Wizard, Thunderstruck II uye Avalon.
Vatambi tinoyeuchidzwa kuti chete bhonasi anogona kuva vanoshingaira chero imwe nguva. Please kuenda “profile” chikamu kuongorora yose pachimirirwa bhonasi tungamidzana yako.